Qaar Ka Mid Ah Hay’adaha UN-ka Oo Shir Hargeysa Lagu Qabtay Ku Soo Bandhigay Filim Laf-jab Ku Ah Qaranimadda Somaliland - Wargane News
Home Somali News Qaar Ka Mid Ah Hay’adaha UN-ka Oo Shir Hargeysa Lagu Qabtay Ku...
Shir lagu falan-qeynayay mashruuca maamul daadejinta dawladaha hoose ee Somaliland ee loo yaqaano JPLG oo ah mashruuc ay maamulaan hay’ado ka tirsan qaramada midoobay oo la shaqeeya dawladaha hoose ee Somaliland oo Salaasadii ka furmay Huteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa, ayaa waxa ka dhashay buuq iyo sawaxan aan xad lahayn, ka dib markii ay ergooyinkii shirkaas ka qeyb-gelayey loo qaybiyey buugaag iyo qalimo uu ku sawiran yahay calankii buluuga ahaa ee Somalia, isla markaana ay ku qoran yihiin Mashruuca JPLG ee Somalia. Taasi oo anfariir ku riday masuuliyiintii xukuumadda dhexe iyo dawladaha hoose ee shirkan ka xaadiray.
Waxa kale oo furitaankii shirkan lagu soo bandhigay filim dukumantari ah oo ka sheekaynayay gobollo iyo degmooyin ku yaalla Soomaaliya oo uu ka tis-qaaday mashruuca JPLG-gu, waxaanay si weyn ugu xaqireen qaranimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee qiimaha adag ugu fadhida bulshadda. Filimkaas waxa ku jiray magaalooyinka Hargeysa, Burco, Boorame, Berbera, Sheekh iyo degmooyin kale oo ka tirsan Somaliland oo ay ku dhex dareen liiska degmooyinka Soomaaliya ee mashruucani ka shaqeeyo.
Isku deygan lidka ku ah qaranimadda Somaliland, waxa si weyn uga cadhooday ka qeyb galeyaashii shirka lagu marti qaaday, kuwaas oo dhacdadan ku sifeeyay fadeexado ka dhan ah masiirka Somaliland oo ay si ula kac ah ugu tallaabsadeen hawl-wadeenadii ka socday Hay’adaha UN-ka ee shirkaas maamulayay arrintaasina waxay dhalisay in goobtii shirku ka socday ay ka baxeen xubno ka mid ah madaxdii shirka lagu marti qaaday oo ay ka mid ahaayeen Maayarka Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan iyo Wasiirka Maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan.
Masuuliyiintii ka socday Hay’adaha UN-ka ayaa cudur daar aan maan-gal ahayn raali-gelin kaga bixiyay fal-dambiyeedkan oo ay ku doodeen inaanay hore uga war-qabin in filimkii ay siteen magaalooyinka Somaliland uu ku darayo dalka qalalaasuhu hadheeyay ee Soomaaliya.
Ilo looga qaateen ah ayaa wargeyska DAWAN u xaqiijiyay in buugtii iyo qalimadii Soomaaliya ku qornayd shirka dib looga ururiyay markii Madashii fowdo isku rogi gaadhay.
Shirkaas oo muddo saddex maalmood ah ka socday Hargeysa waxa shalay soo gabo-gabeeyay Wasiirka Daakhiliga Somaliland, Yaasiin Maxamuud Xiir (Faratoon).
Ma jiro wax tallaabo ah oo ay dawladda Somaliland ka qaaday Hay’adaha qarramada midoobay ee caasimadda Hargeysa dhexdeeda jariimadda kaga galay Somaliland isla markaana wax u dhimay iraadada iyo shacabka qaddiyadda Somaliland.
Hay’adaha qarramadda midoobay iyo NGO-yada caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Hargeysa, ayaa qabatimay dhaqan lid ku ah Somaliland waxaanay xayaysiisyadda ay ku naadiyaan qalabka warbaahinta ku qoraan inay Somaliland ka mid tahay Soomaaliya, taasi oo aanay marna ku mutaysan in tallaabo lagaga qaado.
Haddaba, xukuumadda Somaliland ayaa looga fadhiyaa inay tallaabada ay mudan yihiin ka qaado Hay’adaha ka hor yimaada qaranimadda Soimaliland oo aanay ugu bahdilmin mashruuc yar oo aan waxtar muuqda lahayn oo Hay’aduhu ay ka fuliyaan dalka.
Sidoo kale, mucaaridka ayaa ku naqdiyay xukuumadda inaanay waxba ka qaban Hay’adaha iyagoo Hargeysa jooga sheegta inay ka shaqeynayaan Soomaaliya. Waxa xukuumadda looga hor taalla inay Hay’adaha ka mamnuucdo isticmaalka erayga Soomaaliya oo aanay muddooyinkan dambe dhegahaba uga duwan shacab iyo xukuumadba.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii uu Wasiirkii hore ee Maaliyadda Eng. Maxamed Xaashi Cilmi ku dhaliilayay xukuumadda inay jiraan Hay’ado ruqsad ka haysta Soomaaliya oo iyaga oo Somaliland jooga aaminsan inay ka shaqeynayaan Soomaaliya.